Waxoogaa ilo ah oo loogu talagalay sawir-qaadaha gebi ahaanba bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Maamulayaasha, Burush, Khayraadka, Textures
Photoshop waa mid kamid ah qalabka ugu awooda badan softiweerka xagga tafatirka iyo wax is daba marinta sawirka. Taasi waa sababta ay u jiraan waxyaabo badan oo kala duwan oo aan soo jiidan karno. Laakiin tan waa inaad marka hore heshaa iyaga.
Creativos waxay kumanaan ka mid ah kheyraadkan ku bixisaa maqaalkeeda, iyadoo noo soo dhoweyneysa malaayiinta bog ee ku jira google laakiin aan ahayn kuwa aan suuq weyn ku laheyn suuqa. Maanta waxaan soo qaadaneynaa qalab aan xadidneyn oo aad tijaabiso.
Dib u eegida dhammaan boggaga, mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah ilahaas waxay la socdaan taariikhda la daabacay. Waxaan fahansanahay in dayactirka degelku qaali yahay oo haddii waqti kasta oo aad booqato qoraalkan oo aan la heli karin, waxay u noqon kartaa sababo kala duwan. Mid ka mid ah dhicitaankii xiriiriyeyaasha degellada shabakadaha wax lagu keydiyo
Markaa haddii aadan awoodin inaad soo dejiso, waxaan kugula talineynaa inaad sii eegto bogagga kale, laakiin waxaan rajeyneynaa inay sii socon doonto muddo dheer.
1 Aynu ku bilowno buraashyo
2 Raac qaabka
Aynu ku bilowno buraashyo
Qalabka muhiimka ah ee naqshadeeye oo ka soo bilaabaya xoq waa burush. Taasi waa sababta websaydhyadan ay kuugu adeegi doonaan mashaariicdaada kala duwan.
25 burush oo la magacaabay farsamo
Qalabka 21 burush sigaar cab
Noocyo horay loo sii qorsheeyay si aad ugu gudato shaqadaada si dheecaan badan oo dhaqso badan. Halkan waxaa ku yaal tusaalooyin dhowr ah oo ah waxa qaababka qaarkood yihiin.
Qaabka qaabka warqad japanese ah
Dhammaanteen waan jecel nahay ubax, halkan waa qaar qaababka ubaxa si aad u qurxiso naqshadahaaga.
Mawduuc siinaya dareenka joogitaanka jiilaalkabuluug, qaabab
Moodooyinka aan midab lahayn, gudaha madow iyo caddaan
Iyo in la dhammeeyo: 498 qaab taas ayaa lagu soo uruuriyay meeshan. Baaragaraaf ahaan, haddii aan dhaho halkaan dhammaantood dib looma eegay, sababtoo ah waqtiga oo aan suurtagal ahayn. Dabcan, qaar runtii way shaqeeyaan.
Xaqiiqdii qaar badan oo ka mid ah waad ogayd laakiin kuwa kale hubaal ma aha, haddii ay kuu adeegaan inaad la wadaagto si qof walba ugu raaxeysto faa'iidooyinkaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waxoogaa ilo ah oo loogu talagalay sawir-qaadaha gebi ahaanba waa bilaash
Aditya Aryanto ama sida miinadu u rumowdo